Yamaha EC-05 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
အဆိုပါ EC-05 နာမည်ကျော်ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ် Yamaha ကနေလျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ Yamaha ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုင်ကယ်၏အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ EC-05 ထိုင်ဝမ်က e-Scooter startup အတူ ပူးပေါင်း. နေသူများကဖန်တီး Gogoro နှင့်အာဏာရထားနှင့်ဘက်ထရီအပါအဝင် Gogoro2၏ Scooter အစုရှယ်ယာအများအပြား features တွေ။
အဆိုပါ Scooter တစ် 6,400 ဝပ်လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter 90 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းရှိပြီး0ကနေ 3.9 စက္ကန့်အတွင်း 50 ကီလိုမီတာ / ဇမှ accelerates ။
အဆိုပါ Scooter 110 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးနှစ်ခုဖြုတ် Gogoro-သဟဇာတလီသီယမ်ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ Yamaha ကားများနှင့်လှေအပါအဝင်များစွာသောလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များဖြင့်မျှဝေနိုင်မယ့်စံချိန်စံညွှန်းမီလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်-နိုင်ခဲ့ဘက်ထရီဒီဇိုင်းဟွန်ဒါ, Kawasaki နှင့်ဆူဇူကီးအတူလက်တွဲထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဘက်ထရီတည်ဆဲ Gogoro GoStation ဘက်ထရီ-လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အဆောက်အဦမှာဖလှယ်မှုနိုင်ပြီး Gogoro GoCharger အမည်ရှိ Home-charger ကိုပေးပါသည်။
အဆိုပါဒိုင်ခွက်အဆိုပါ Scooter ကြိုးမဲ့ RFID သော့ချက်ရှိပြီး Scooter apps များဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်စမတ်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်သည့် Gogoro 2. ၏ဆင်တူသည်။
အဆိုပါ Scooter4အရောင်ရရှိနိုင်ပါသည်:
Islate အပြာရောင်, စိန်က Black, နက်ရှိုင်းသောအပြာရောင်နှင့်သကြားဖြူ။
ကို 2020 Yamaha ကိုမော်ဒယ်များ
Yamaha ဆိုင်ကယ်အားလုံးကို filter ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်ကြည့်ပါ။
သတိပေးချက် အချို့သောပုံစံများကို Myanmar တွင်မရရှိနိုင်ပါ။ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ဒေသခံ Yamaha ကုန်သည်တစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။